२ गुगल क्यालेन्डरहरू कसरी सिnch्ख्रोनाइज गर्ने Martech Zone
मेरो एजेन्सीको अधिग्रहणको साथ र अब मेरो नयाँमा पार्टनरको रूपमा काम गर्दै सेल्सफोर्स पार्टनर, म एक मुद्दा छ जहाँ म दुई चलिरहेको छु जी सुइट खाताहरू र अब प्रबन्ध गर्न २ पात्रोहरू छन्। मेरो पुरानो एजेन्सी खाता अझै पनि मेरो प्रकाशन र बोल्नका लागि प्रयोग गर्न सक्रिय छ - र नयाँ खाता यसको लागि हो Highbridge.
जहाँ म साझेदारी गर्न सक्दछु र अर्को क्यालेन्डर हेर्न सक्दछु, म वास्तवमै व्यस्तको रूपमा अर्को पात्रोबाट समय देखाउँछु। मैले कुनै पनि प्रकारको समाधानको लागि खोजी गरें ... र मैले गर्न सक्ने एक मात्र तरिका भनेको प्रत्येक खातामा अन्य खातालाई आमन्त्रित गर्नु हो जुन धेरै कुरूप हो र ग्राहकहरूको बीचमा गोलमाल ल्याउन सक्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि मसँग प्रत्येक क्यालेन्डरको लागि स्व-शेड्युलिंग अनुप्रयोगहरू छन्। यसको परिणामले धेरै बैठकहरू विवादास्पद हुने कार्यमा मिलाइएको छ जुन मैले पुनः शेड्यूल गर्नुपर्‍यो। यो केहि निराश छ। म त्यो चाहन्छु जी सुइट अर्को क्यालेन्डरको सदस्यता लिने क्षमता प्रदान गर्‍यो र यो पूर्वनिर्धारितको रूपमा छ व्यस्त प्राथमिक पात्रोमा।
मेरो खोजीले राम्रो समाधानको परिणाम दियो, SyncThemCenderars। प्लेटफर्मको साथ, मँ दुई सिron्क्रोनाइजेसनहरू थप्न सक्षम भएँ ... प्रत्येक खाताबाट अर्कोमा।
तपाईंको पात्रोहरू किन सिnch्ख्रोनाइज गर्नुहोस्?
यस कार्यक्षमताका लागि त्यहाँ धेरै प्रयोग केसहरू हुन सक्छन्। तपाईं आफ्नो निजी / व्यक्तिगत पात्रोमा आधारित तपाईंको काम क्यालेन्डरमा समय ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ टोली क्यालेन्डरबाट तपाइँको व्यक्तिगतमा सबै घटनाहरूको प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ। वा हुनसक्छ तपाई स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन धेरै बिभिन्न ग्राहकहरुसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको कामलाई समन्वय गर्न चाहानुहुन्छ।
खाताले तपाईंलाई प्राथमिक क्यालेन्डरमा साइन अप गर्न अनुमति दिन्छ र त्यसपछि5क्यालेन्डरहरू समिकरण गर्दछ। अझ राम्रो, तपाईं पात्रो विवरण अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ:
अनुस्मारक - पूर्वनिर्धारित हो खाली गरियो त्यो दुबै क्यालेन्डरहरूको परिणामस्वरूप तपाईलाई एक रिमाइन्डर पठाइनेछ।
रंग - विशेष गरी सहयोगी, म प्रत्येक क्यालेन्डर प्रविष्टिलाई एक विशिष्ट रंगको साथ पहिचान गर्न सक्दछु।
यो एक महान सानो वेब अनुप्रयोग र एक वार्षिक सम्झौताको लागि सस्तो हो। म निश्चित छु यसले लामो समयको लागि खर्च गरे भन्दा बढि बचाउनेछ।
अस्वीकरण: म एक सम्बद्ध छु SyncThemCenderars
टैग: जी सुइटगुगल क्यालेन्डरgsuiteकसरीउत्पादकतानिर्धारणसिंकसिङ्क्रोनाइज गर्नुहोस्syncthemcenderars